यस्ता थिए विश्वकै पहिलो क्यामेरा, फ्रिज, कार र कम्प्युटर, हेर्नुहोस् अत्यन्त दुर्लभ फोटो
काठमाण्डौ । मोवाइल, कम्प्युटर, फ्रिज, कार र बाइक जस्ता वस्तुहरुको आविस्कारले मानिसको सोच मात्र बदलिदिएन, उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । तपाईलाई थाहा छ, विश्वको पहिलो क्यामेरालाई उचाल्न मात्र १५ जना मानिस चाहिन्थ्यो । यस्तै पहिलो मोवाइल फोनको वजन कति थियो, पहिलोपटक बनाइएको रेफ्रिजेरेटर कस्तो देखिन्थ्यो होला ? आज...
जापानमा फस्टायो रुने र रुवाउने अचम्मको व्यवसाय, कर्मचारी रुवाउन कम्पनी मरिहत्ते गर्दै !
बीबीसी । हिजोआज जापानी कम्पनीहरु आफ्ना कर्मचारीलाई रुवाउने अचम्मको काममा जुटेका छन् । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई रुवाउने मामलामा चासो देखाएकै कारण रुने र रुवाउने व्यवसाय संचालन गरेको एक अनौठो कम्पनी समेत पछिल्लो समय जापानमा चम्किरहेको छ । यो सेवामा पहिला कर्मचारीलाई कुनै मन छुने फिल्म देखाएर रुवाइन्छ र रोएका कर्मचारीहरुको आँसु...
२० मिनेटमा पूरा घुम्न सकिने विश्वकै साना देश, तर सबैभन्दा धनी पनि उनीहरु नै !
काठमाण्डौ । विश्वको ठूलो देश नै सबैभन्दा धनी हुन्छ भनेर सोचिरहनुभएको छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । विश्वमा केही यस्ता पनि देश छन्, जो क्षेत्रफलको हिसाबले एकदमै साना छन् र जिडीपीको हिसाबले निकै माथि र धनी । यति मात्र होइन, विश्वका केही साना देशहरु पर्यटन उद्योगका लागि चर्चित, उदाहरणीय र सफल पनि छन् । भेटिकन सिटी विश्वकै सबैभन्दा सानो देश...
१२ किलोमिटरसम्म पत्नीको शव बोकेर हिँड्ने गरीबको कथाले विश्वमै सनसनी, भारतको तीव्र आलोचना
एजेन्सी । नेपालको संविधानमा पछाडि पारिएका भनिएका मधेशीहरुको सवाल नसमेटिएको भन्ने लफडा झिकेर ५ महिनासम्म नाकाबन्दी गरी अनाहकमा नेपालीलाई दुःख दिएको र आफूलाई विश्वमै उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा दाबी गर्ने भारतमा गरीबहरुले कुन हदसम्मको पीडादायी र दर्दनाक जीवन बिताउनु परिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरणले अहिले विश्वभरि नै सनसनी मच्चाइरहेको छ...
यस्तो अचम्मको ठाउँ, जहाँ आफ्नो पार्टनरलाई आइ लभ यू भनेको २१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ !
काठमाण्डौ । भनिन्छ सच्चा मायाको अगाडि पैसाको कुनै मूल्य हुँदैन । तर कतिपय मानिस आफ्नो साथीलाई इम्प्रेस गर्न अलग–अलग तरिकाबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्छन् । डेटिङमा गएर आफ्नो पार्टनरलाई 'आइ लभ यू' भन्ने क्रममा समेत मानिस केही फरक गर्न चाहन्छ । तर आज हामी तपाईंलाई यस्तो ठाउँको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जहाँ आइ लभ यू भन्नका लागि...
गुडिरहेको रेलबाट फिल्मी शैलीमा ९ करोड नगद चोरी, यी हुन् विश्व चर्चित चोरी प्रकरण
काठमाण्डौ । भारतको तमीलनाडू राज्यको सेलमबाट चेन्नई जाँदै गरेको रेलबाट फिल्मी स्टाइलबाट ९ करोड बढी रकम डकैती भएपछि पूरा भारतमा हलचल मच्चिएको छ । गुडिरहेको रेलको छत छेडेर भित्र पसेको डाका समूहले रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाको ९ करोड भन्दा बढी नगद चोरी गरेको बताइएको छ । करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बैंकको पैसा राखिएको रेलको डिब्बाबाट सो रकम चोरी...
ओबामाकी कान्छी छोरी रेष्टुरामा वेटरको काम गर्दै !
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकी छोरी साशा ओबामा ह्वाइट हाउसको ऐस आरामलाई छाडेर एक अमेरिकी रेष्टुराँमा वेटरको काम गर्छिन् भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्ला, तर सत्य यही हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार १५ वर्षकी साशा गर्मीको विदालाई उपयोग गर्दै मेराचुसेट्सको मार्था वाइनयार्डस्थित एक रेष्टुराँमा काम गरिरहेकी छिन् । जहाँ...
काठमाण्डौ । तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर आगामी दिनमा कुन विषय रोज्ने भन्ने बिलखबन्दमा रहेकाहरुका...
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सर्च इञ्जिन गुगलले तपाईंलाई घरमै बसी बसी विजिनेश गर्ने अवसर दिइरहेको छ । यो विजिनेशमा सहभागी भएर तपाईले घरमै बसी–बसी मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाई गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले ठूलो लगानी पनि गर्नुपर्दैन । गुगलले आफ्नो एडसेन्स सर्भिसमार्फत यस्तो मौका दिइरहेको हो । यो गुगलको एडभरटाइजमेन्ट सर्भिस...
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : हिलारीभन्दा ट्रम्प १ सय गुणा धनी !
काठमाण्डौ । अमेरिकामा आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दुवै उम्मेद्वारको आधिकारिक घोषणा भइसकेको छ । रिपब्लिकन पार्टीबाट डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट हिलारी क्लिन्टन चुनावी मैदानमा उत्रिइसकेका छन् । प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि दुवै उम्मेदवारहरुको एक एक कुराबीच तुलनाहरु हुन थालेका छन् । यसमा राजनीतिक पहुँच तथा...
तीन वर्षकी बच्चीले यूट्यूबबाट कमाइन् १० करोड, तर कसरी ? (साथमा भिडियो पनि)
काठमाण्डौ । अभिभावक आफ्नो बच्चाको करिअर बनाउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य हुन्छ आफ्नो बच्चा ठूलो भएपछि ज्ञानी, सफल होस् र धेरै धनसम्पत्ति र इज्जत कमाओस् । तर हामी तपाईंलाई यस्तो बच्चाको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जसले केही वर्षको अन्तरालमा आफ्ना अभिभावकलाई करोडपति बनाइदिए । अचम्म यो छ कि यी तीन बच्चाको...
खानेपानीका कर्मचारीको पारिश्रमिक १२ माना मकै !
सोलुखुम्बु। वर्षभरी काम गरेबापत अन्न दिने चलन धेरैजसो ठाउँबाट हट्दै जाँदा सोलुखुम्बुको सोताङ गाविसमा भने खानेपानी आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक स्वरुप अन्न (मकै) दिने गरिएको छ । सोताङ–१, २ र ३ मा पानी वितरण गरिने खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताले कर्मचारीलाई प्रतिघरधुरी प्रतिवर्ष १२ मानाका दरले मकै उपलब्ध गराउने गरेका छन् । बिहान...
विश्वमै अग्ला महिला लातवियाई(Latvian) र पुरुष नेदरल्याण्डका, कदको विकासमा अमेरिका पछाडि
एजेन्सी । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार संसारमा सबैभन्दा अग्ला महिला उत्तरी यूरोपियन मुलुक लातवियाई(Latvian)का र अग्ला पुरुष नेदरल्याण्ड्सका हुने देखिएको छ । यसैगरी, ग्वाटेमालाका महिला र पूर्वी टिमोरका पुरुष विश्वकै साना कदका हुन्छन् । बीबीसीका अनुसार शोध पत्रिका इलाइफमा प्रकाशित अध्ययन नतिजामा पुरुषहरुको औसत कद ६ फिट हो । तर एक औसत...
ट्राफिक जाममा फसेका १२ जनाको मृत्यु !
इण्डोनेशियामा केही दिन अघिदेखि यति लामो ट्राफिक जाम भएको छ कि जसमा फसेकामध्ये १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बीबीसीका अनुसार पानीको कमी र थकाईका कारण अत्यधिक लामो जाममा फसेकाहरुको मृत्यु भएको हो । जावा द्वीपमा इस्लामहरुको पवित्र पर्व रमजानको महिनाको अन्तिममा छुट्टी मनाउन निस्किएका सर्वसाधारणहरुको संख्या ज्यादै भएका कारण औधी...